हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गामा १३ नयाँ उद्योग, दुई वटा आउन सकेनन्, के छ समस्या? :: BIZMANDU
हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गामा १३ नयाँ उद्योग, दुई वटा आउन सकेनन्, के छ समस्या?
प्रकाशित मिति: Aug 7, 2018 3:27 PM
हेटौँडा। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण गरिएका १५ उद्योगमध्ये १३ उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०५६ मा सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी बन्द भएको हेटौँडा कपडा उद्योगको २० बिघा जमीनमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी योजना बमोजिम ती उद्योग सञ्चालनमा आएको हो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले बोलपत्रद्वारा थप १५ उद्योग निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। पन्ध्रवटै उद्योगका लागि संरचना तयार भएपनि सिइ हाइड्रो मेकानिकल बक्र्स प्रालि, थ्रि स्टार गुप प्रालि भने अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सिइ हाइड्रो मेकानिकल बक्र्स प्रालि, न्यू मकवानपुर खाद्य उद्योग प्रालि, फार्मर एग्रो सेन्टर प्रालि, नेशनल स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ प्रालिले उद्योग सञ्चालन गर्न २०७३ जेठ अघि नै सम्झौता गरेका थिए।
भवन निर्माण भए पनि विद्युत् अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेको उद्योग संघका जिल्ला अध्यक्ष नवराज अर्यालले बताए। उक्त क्षेत्रमा हाल खपत भइरहेको विद्युत्मा थप १० केभीए विस्तार गरिएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्राविधिक कारणले केही महिना ढिला भए पनि उद्योग भने लक्ष्यअनुसार सञ्चालन भइसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा १५ वटा नयाँ उद्योगमध्ये सञ्चालन हुन बाँकी दुई उद्योग पनि छिटो सञ्चालन हुने अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए। सो क्षेत्रभित्र ९४ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने २९ उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। एक दर्जन धेरै पुराना उद्योग बन्द अवस्थामा छन्।
हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गामा १३ नयाँ उद्योग, दुई वटा आउन सकेनन्, के छ समस्या? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।
कुरिनटारको ६ विघा जग्गामा वियर उद्योग, ओल्ड दरबारका लगानीकर्ताले ल्याए बाह्रसिंगे
पेरिसभन्दा महँगो काठमाडौं: आनाकै नौं करोड रुपैयाँसम्म, मूल्यवृद्धिमा लगामको खाँचो
हकप्रद भर्न पहिलो प्राथमिकता शेयरधनीलाई, चाहेजति आवेदन दिन पाउने, त्यसपछि मात्र लिलाम
१५ अर्बको सिमेन्ट उद्योगमा सांसदबीच चर्को द्वन्द्व, एउटा रोक्न हिड्ने अर्को बनाउन जुट्ने
एनआईसी एशियामा प्लस टु र व्याचलर सकेका ४ सयलाई जागिर, अनुभव नभएकाले पनि काम पाउने
बिग मर्जर बहश: तीन वर्षपछि मात्र खराब कर्जामा सुधार, सबै कर्मचारीको तलब बृद्धि हुने
अब जुस र इनर्जी ड्रिंक्स आयात गर्न नपाइने, २ हजार डलरमाथिको आयातमा सर्त राखियो